muchina uyu ndiyo zvaitika midziyo yaishandiswa kutengesa zvokudya. The muchina wose anoshandisa zvokudya-mugiredhi zvinhu uchikurukura chikafu, izvo zvinoonekwa chikafu utsanana zvinodiwa munyika dzakasiyana-siyana.
Uye kuburikidza Frequency kutendeuka stepless kumhanya kuzvidzora, nyore kudzidza uye nyore kushandisa,
Rakanakira kushandiswa mune svikiro uye makuru mafekitari.
muchina Izvi kushandiswa pakugadzira siomai wokuenzanisira, nyore kuti ishande uye vakachena
Havafaniri kuita hupfu, chete kuisa mukanyiwa achizadza kupinda Mugomo uye stuffing Mugomo, uye ipapo inobereka siomai rwoga, The muchina unogona kuzvidzora zvokuzvigadzirira simbi dzomuchina mukanyiwa pachaunga svuura, akachekwa, uye muzadze. Uye dhayira pamusoro conveyor bhandi kuiripa kamwe.
The chigadzirwa unonwisa yakaita dzakaitwa nemaoko
Pakukora ganda uye uwandu zvekupfakira zvinogona kugadziridzwa maererano vatengi zvinodiwa.
The Hopper zviri nyore kuti nekukatanura uye yakachena.
The Fixtures wakaumbwa UHEWPE uye zviri nyore kuchenesa.
Pakukora ganda kunogona yakaderera 1mm
The rokuchenesa muchina anogona kushandisa mhepo pfapfaidzo pfuti kuchenesa redehwe rokuita hurongwa, uye ipapo kubvisa matehwe rokuita maitiro uye muhombe ndiro Anoumba wemuTesitamende kuti kushandisa mvura yokuchenesa
Model mhando BK-780
Product uremu 12g, 15G, 20g, 25g, 30g
chinzvimbo 6000pcs / h
Noupamhi wrapepr 55mm, 60mm, 65mm, 70mm
Machine uremu About 800kg
Divi (L * W * H) 1350 * 1200 * 1700mm
spees adjiust ne transducer 2pcs
Kwegadziriro kudzvanya chinotenderera 2 chinotenderera
Achigadzira nzira 2pcs panguva
Previous: otomatiki Tokyo mabhanana keke nokuparira Machine
Next: Automatic nokurasa steamed bun Anoumba muchina
Otomatiki Shaomai Machine
Otomatiki Siomai Machine
Shumai Kuita Machine
Tudyo Extrusion Food Machine
Automatic nokurasa samosa nokuparira Machine
Semi-otomatiki zai cake Anoumba muchina
Automaticn ruomba evästeet depositor
Automatic nokurasa steamed bun Anoumba muchina